Nin weerar geysan rabay oo lagu qabtay Washington - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Nin weerar geysan rabay oo lagu qabtay Washington
Nin weerar geysan rabay oo lagu qabtay Washington
Booliska Maraykanka ee US Capitol Police waxay gacanta ku dhigeen Nin ka soo jeeda Gobalka California, oo tiro Mindiyo iyo Maqaro ku dhex watay gaarigiisa oo uu dhigay meel ku dhow Xarumaha Dhexe ee Golaha The Democratic National Committee (DNC) ee magaalladda Washington DC.
Eedeysanaha waxaa magaciisa lagu sheegay Donald Craighead oo 44 jir ah, kana soo jeeda magaalladda Oceanside ee Gobalka California waxaa loo xiray sababo la xiriirta inuu haystay Hub sharci-daro ah.
Eedeysanaha oo ka soo jeeda Degmadda Oceanside ee Gobalka California waxa uu watay Gaari dusha furan oo noociisu ahaa Dodge Dakota pickup truck.
Booliska waxay tuhunsan yihiin in Ninkaasi ka tirsan yahay Kooxda rumeysan Sarraynta Dadka Caddaanka ee Cusuriga a uu qorsheynayey inuu geysto Weerar.
Previous articleFarmaajo oo Guddi u saaray baaritaanka Kiiska Ikraan Tahiil